Umhla My Pet » Kutheni Men Love egabadeleyo Queen Iinyosi
ukubuyekezwa: Sep. 12 2020 | 3 min ukufunda
Le site ukuthandana, kunye site ukuthandana kubathandi pet, hayi ngaphantsi. Ngoko singathetha nje umzuzu malunga izinja ababhinqileyo? Kwaye ndiya kuthetha “izinja ababhinqileyo” ngengqiqo eyona euphemistic, njengoko inxulumene ukuba CANINES, kodwa nogxa yabo iintlobo zabantu enika nemazi nezinja igama lwabo olubi. Kodwa ke ngenxa yokuba lo site SFW kwaye ngeenzame ukubabuyekeza izinja ababhinqileyo intlonipho nothando esibafaneleyo-makhe sithethe endaweni malunga egabadeleyo Queen Iinyosi (okanye HQBs) kwaye amadoda babathandayo, noko kukho sifunde kuzo ukwenza ulwalamano lwethu ngcono.
Ixesha kunye nexesha kwakhona, Ndibe lingqina lokuqala-ngesandla ngxuba “guy nice uthanda HQB”. Ngokwenene ukuba kuyamangalisa ukuba nanko-onenyameko, uhlobo abantliziyo, indoda enembeko nesisa obonakala Ihlale indawo egobile ngasemva ngenxa HQB yakhe; kwaye kubonakala ukuba simthande wonke umzuzu wokwamkela neemfuno zakhe yaye zithwele umthwalo wolu engentle yakhe obangelwa. Kodwa ezi budlelwane ezinye eyona Ndakhe ndabona phantsi obude; njalo kakhulu, Mna kwakuthe, ngokwemiqathango umgangatho ubudlelwane impumelelo.
Ngoko ke, singenza, njengoko endilisekileyo, abafazi abacingayo bafunde ukusuka HQBs ukutsala nokugcina uhlobo zabantu ukuba kubonakala ukuba akukho ngxaki nokutsala kunye nokugcina?
1) HQBs kuba ozaziyo ukuba ungubani
HQBs bayazi ukuba bangobani kwaye oko bafuna. Bayazi oko bakuzisileyo etafileni kwaye umdla kuba iimfuno zabo yabo, ukuze babe ekhethekileyo evela umdla iqabane wabo. Oku uyadika ukuthandana ngokwakho, kunye HQBs ndicinge ngako oku.
2) HQBs alinamyalelo lwe hlabathi
An HQB kubonakala ukuba umyalelo kwehlabathi engeenxa zonke kuyo (nokuba ngokwenene na okanye hayi). Olu phawu inika inkxaso enjini kwiqabane wakhe ego-ukuba unolawulo ezinye ngokwenza onwabe, yaye uyilawulayo “Umhlaba”, ke kolawulo “Umhlaba” lokumelwa. Yinto ukuba yonke “ukuba A = B and B = C, ngoko A = C” into. Oku kuthetha njani ibe incam luncedo? endilisekileyo, abantu abacingayo abafana nawe nam badla kuba ngqongqo kakhulu kunye nezenzo zethu kunye nonxibelelwano. Ngokuba kukuzimela ngendlela eyahlukileyo kakhulu kunokuba silwe, leyo M.O esisiseko. ye HQB yakho avareji kwaye yintoni ukuba yobuqhetseba, ulawulo necekethekileyo ye “Umhlaba”. Kodwa ngokuba kukuzimela ngaphezulu iza kunika umyalelo olukhulu yehlabathi yakho, ngaphandle iziphumo ngenye ezingalunganga ndlongo. Omnye umzekelo oku nje achaze into ofuna nesizathu iyavakala ngokwembono yakho, sans le bebajongela, komsindo uyazithoba abaqeshwe njalo rhoqo ekwenzeni izicelo efanayo HQBs.
3) The ngonaphakade-ziwayo nezingqinekayo, “Sisintu Challenge”!
Indlela amanqaku ukuthandana ezininzi iincwadi ufunda ukuba esingelwe phantsi kwezinye inguqulelo ingcamango esisiseko ukuba abantu ungathanda ngokuUzakunikwa mngeni, ngoko baziva owodwa xa bayakwazi ukoyisa wathi mngeni? amadoda, ngokwabo, Ndothetha khangela eli bhinqa lula kakhulu ngakumbi kunalowo yincwadi usoloko-ezikhoyo evulekileyo. Ngamanye amaxesha eziboniswa elusiveness as-indlela ndithi-ukuba ekumnikeni intwana encinane ukuvakalisa naluphi na uhlobo imvakalelo ezintle okanye ingxelo (ekulapho HQBs kuza). Amanye amadoda akakwazi ukuxhathisa umngeni zokuzama kwiintlobano naluphi na uhlobo impendulo ezinqwenelekayo evela HQB kwaye ngoko uba into umdla omkhulu.
Wenza njani (kwakhona, njengoko endilisekileyo, Umfazi olunovelwano wena) Tyhila ungene kokuba umngeni? Oku ngokulula babe disingenuous umdlalo-ebaleni iincwadi ezifana “yemiGaqo” (Fein kunye Schneider) zonke, leyo akusebenzi wonke kwaye bakushiye yokugula imvakalelo kunye bebengazi wokuba ndithini na, xa. kunokuba, ukwakha lube ngokupheleleyo ngokwenene ubomi bakho umdla wokwenza ube mngeni oyinyaniso, nambethelela phantsi ngosuku. Kuphela Kuya khangela Cima loo wonke “kuba lucelomngeni” igalelo ukuba kunjalo ungracefully esizibonakalisa HQBs (ukuba abantu bafumane nomtsalane kangaka), kodwa umhla wakho uya kuziva ukuba kakhulu bathandwe xa uye wenza ingongoma ukuchitha ixesha lakho elixabisekileyo ngokucacileyo naye.
4) akukho imidlalo
Kukho kufike ixesha laxa abantu bayayeka ajongane imidlalo yokuqashela-enoba oko ngenxa yalowo lwazo oqolileyo kancinci, okanye ulwalamano ngokwayo kuba wayekhulele ngaphaya ngudlalani okokuqala. Mhlawumbi eli cebo ke ubuncinane ngokuyinxenye ukwathulelw 'ixesha elide' yonke mgaqweni enikezelwa HQB / ubudlelwane Guy Nice. HQBs lokuthetha into afuna, kwaye xa ufuna ukuba. Kukho bambalwa imidlalo ezin- kwi ojongene HQB, kunye namadoda amaninzi ukufumana olu yokunyhamnyheka. Oku iprogramu asuka isibini beentetha tips-in Wangqala unxibelelwano lwakho (i.e. ukuba -zithemba), kwaye kwacaca kakhulu into enisukuba niyithanda ukusuka iqabane lakho ukuba kungathethwanga sele kewzeke, kokuba yanikezela umngeni ukuba kusenokwenzeka uzakuyonwabela unyathele ukudibana kuba ukhule ngendlela ecacileyo kwaye akayi ukoyika imizamo yakhe iya kuba lilize.
Ngoko ke, Iintliziyo-thabatha nobubele intliziyo, kwaye la macebo intliziyo-yaye mhlawumbi nathi ibango isabelo kancinane ezinkulu emarike Nice Guy ngokwethu!